Cheesecake na blueberries - Ntụziaka Thermomix | Usoro ọgwụgwọ
Ihe eji megharịa ọnụNkeji 55Ndị mmadụ 8Kalori 250
Achicha achicha a di iche iche n’ihi udiri nke mgwakota agwa ya na bisikiiti ya. Ọ bụ ihe a kpochapụwo cheese cheese uzommeputa ebe ndochi ya dị mfe nke na ọ nwere naanị chiiz ude na blueberries.
Mgwakota agwa nwere ntụ ọka, ọka na butter, ma ọ ga-eju gị anya na ngwakọta nke aromas dị n'etiti lemon na pawuda. Ga-amasị ya crunchy udidi nke ga-anọgide na isi nke achicha na dị ka a crumble n'elu.
Ọ bụ achicha kpochapụwo na vinteji, yana mgbakwunye nke blueberries, mkpụrụ osisi bara ọgaranya na antioxidants na vitamin. Can nwere ike ịlele vidiyo ngosi anyị ka ị ghara ịhapụ usoro ọ bụla.
1 Cheesecake na Blueberries
Nke a cheesecake bụ kpochapụwo uzommeputa na-enweghị ọtụtụ Efrata ke ndochi ya, dị nnọọ cheese na blueberries. Ejiri ngwakọta nke kuki na kuki mee ya nke ga-agbanwe ekpomeekpo nke ihe eji megharịa ọnụ.
Ntụziaka ụdị: dezaati
Nkwadebe oge: 20M
Nri oge: 35M
Achịcha mgwakota agwa
110 g bọta dị nro
Zest nke lemon ma ọ bụ ole na ole tụlee nke lemon kachasi mkpa
40 g nke oat akpọrepu
100 ntụ ọka wit
1 teaspoon ntụ ịme achịcha
1 teaspoon ala pawuda
450 g ude cheese ụdị Philadelphia
100 g nke-acha anụnụ anụnụ
Anyị na-etinye n'ime iko Thermomix anyị niile akọrọ ihe dị ka 100 g ntụ ọka wit, 40 g nke oat flakes, teaspoon nke ntụ ntụ, ngaji ala cinnamon, nnu nnu, ihe ọestụ ofụ lemon na 150 g shuga. Anyị na-agwakọta ya niile n'oge 10 sekọnd na ọsọ 3.
Tinye 130 g nke butter na mmemme ọzọ maka 45 sekọnd na ọsọ 3,5. A ga-enwe obere mgwakota agwa nwere ihu aja, nke anyị ga-eji aka anyị gwakọta mgbe anyị debere ya na pan.
Anyị na-akwadebe pan gburugburu 18 cm na dayameta nke nwere ike iwepụ ngwa ngwa site na ebu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-edebe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na ala iji nwee ike iwepu achicha ahụ n'ụzọ dị mfe mgbe a na-eme ya. Anyị na-ewere akụkụ nke mgwakota agwa ma anyị ga-awụpụ ya na isi nke pan ahụ. Anyị ji aka anyị pịa ka ọ gbasaa ma dịkwa larịị. Anyị wepụtara onwe anyị.
Na iko anyị dị ọcha anyị ga-akwadebe ude ndochi. Anyị ga-agbakwunye cheese g nke 450 g cheese, 75 g shuga na lemon zest ma ọ bụ tụlee nke vanilla wepụ. Anyị na-agwakọta n'oge 15 sekọnd na ọsọ 3,5.
Anyị na-eweghachi ude ahụ n'ime pan wee gbasaa mgwakota agwa nke ọma ruo mgbe elu ya dị mma. Anyị na-atụba anụnụ anụnụ n'elu ma gbanye ha n'ime mgwakota agwa. Anyị na-atụba mgwakota agwa nke mgwakota agwa n'elu. Anyị ga-eji ha n’aka anyị kọwaa ha n’ime ntakịrị.
Anyị na-etinye ya na oven na 180 Celsius na ọkara-ala tree na okpomọkụ na ala. Anyị na-akpọọ ya ihe dị ka nkeji iri abụọ na ise, ruo mgbe anyị hụrụ na elu ya na-acha nchara nchara. Anyị na-ewepụ ya n’ọkụ ma jụkwa oyi. Anyị nwere ike itinye ya n'ime igwe nju oyi nke mere na ọ ga-ete aka nke ọma ma were ya dị ọhụrụ.
Chọpụta ntụziaka ndị ọzọ nke: Postres
Pathzọ zuru ezu na edemede: Thermorecetas » Thermomix Ezi ntụziaka » Postres » Cheesecake na Blueberries
Oyi kukumba na yogot ofe